Chirevo muChirungu - UniProyecta
Kana uchitaura mutauro mutsva senge Chirungu, zvakakosha kuti udzidze iyo zvirevo muChirungu, sezvo ivo vachizokutendera iwe kuti uite zvakakosha mabasa.
Uyu mutauro unoshamisa wave kukosha kwakakosha nhasi, nekuti zvinokutendera kuti utaure nevanhu vazhinji; Icho zvakare chishandiso chakakosha padanho rehunyanzvi, chinokutendera iwe kukudziridza ruzivo rwako uye kunyange kuwana basa riri nani kana bhizinesi.
Chirevamwene chinoita basa rakakosha kwazvo munyika ino yemutauro weChirungu, nekuti zvinoshanda sekubatanidza pakati pezwi rimwe nerimwe, ndiko kuti, pasina zvirevamazwi, mazwi anoteverwa nemazita haagone kuumbwa kana imwe pfungwa yaisakwanisa kupihwa.
1 Kupatsanurwa kwemashoko
1.1 Chigadziro chenzvimbo
1.2 Chirevo chenguva
1.3 Chirevo chekutungamira
Chirevo mu English Ndiwo mazwi ane chekuita nekurondedzera zvinhu zvemubatanidzwa zvemutsara uye anogona kuiswa muzvikamu zvinoenderana nezvaunoda.
Ndevaya vari kuseri kwechiito chikuru, icho chinowanzo kuve (kuva) zvinoreva kuva kana kuva. Pakati payo pane:
Muenzaniso ungave kutaura kuti:
I live in España
Izvo zvakakosha kuti nguva ichataurwa, akakosha ndeaya:
Semuenzaniso, iwe unoshandisa "
”Nemataurirwo ane maawa:
(Ini ndinowanzo simuka pa7).
”Muchirevo gara uchiziva kuti chinongoshandiswa kana uchida kutaura nezvezvikamu zvezuva, mwedzi yegore, mwaka yegore kana zuva. Semuyenzaniso:
I usually work in the afternoon
(Ini ndinowanzo shanda masikati) kana
in Romania, it snows in december
) muRomania kunonaya muna Zvita)
Unofanira kushandisa chete "
”Panoitwa mazwi enguva anoreva mazuva kana mazuva evhiki. Semuyenzaniso:
I always do my English homework on Sunday
, (Ndinogara ndichiita basa rangu rechikoro rechirungu musi weSvondo)
Ndeavo anoshandiswa kuratidza kufamba, semuenzaniso:
the car is going towards that building
(mota irikuenda yakananga chivakwa ichocho).
Dzidzira uye uve akanakisa
Kudzidza kwese kunotora tsika. Kana zvasvika pakudzidza mutauro wepasirese, zvakakosha kuti unyatsoongorora zvirevo, zvirevo muChirungu, shanduko dzaunogona kuita, mangani aripo uye kuti unozvinyora wega nguva dzese kuti uve nechokwadi chekutaura nemazwi akakodzera. kuti iwe unoda uye kunyange kudzidzira arufabheti zvakare kuti uzviwedzere iwe pachako mune iyo nyowani nyika.
Rangarira kuti shanduko inogona kuitwa chete newe. Iwe unoteerera nziyo, unozviitira gwara kana tafura uye unodzidzira zvizere. Iwe uchaona kuti munguva pfupi kana iwe ukatsaura kanokwana maawa maviri pazuva kune uyu mutauro wakanaka iwe unozodzidza zviri nyore uye nekukurumidza.
Categories Mitauro, Shona Kubatikiti kufamba
Nhamba dzeChirungu kubva 1 kusvika 1000
Mwedzi yegore muChirungu
kudzidziswa » Mitauro » Shona » Chirevo muChirungu
Chirevo cheFrance: ndezvipi?
Chiito cheFrance: rondedzero, kurovedza muviri uye conjugation
Rudo mitsara muChirungu